पैसा नभएको ‘चेक’ किन दिन्छन् ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / पैसा नभएको ‘चेक’ किन दिन्छन् ?
पैसा नभएको ‘चेक’ किन दिन्छन् ?
Posted by: युगबोध in संक्षिप्त समाचार March 14, 2019	0 54 Views
बाके (युस)– नियत खराब कि बाध्यता ? ‘चेक बाउन्स’ को बढ्दो मुद्दाले यो प्रश्न उब्जाएको छ। कारोवारमा ‘चेक’ लाई विश्वास, भरोसा र प्रमाणको रुपमा लिइन्छ। नियत खराब छैन भने तोकिएको मितिमा साटिन्छ। ठूलो रकमको कारोवार त प्रायः चेकमार्फत नै हुने गरेको पाइन्छ।
बा“केको अदालत र प्रहरी कार्यालयमा पुगेका बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा हेर्दा ‘चेक’ दिएर ‘फटाही’ गर्नेको कमी छैन। ५० हजारदेखि ६० लाखसम्मका मुद्दा अदालतमा परेका छन्। प्रहरीमा त सानातिना दैनिक पा“च वटासम्म निवेदन आउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बा“केका मुद्दा फा“टका इञ्चार्ज दीपक मल्ल बताउनुहुन्छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिङ कसूरका ५४ वटा मुद्दा परेका छन्। गत वर्षका चारवटा सरेर आएका छन्। अदालतका नासु प्रकाश विकका अनुसार, अहिलेसम्म नौ वटाको टुंगो लगाइसकिएको छ।
बैंकिङ कसूरका मुद्दा त पहिला पनि आउने गर्दथे। पछिल्लो वर्ष भने दोब्बरले बढेको छ। नासु विकका अनुसार गतवर्ष २६ वटा मुद्दा परेका थिए। त्यसमा २२ वटाको फैसला भयो भने चारवटा निरन्तरतामा परे।
गाउ“–शहरमा आर्थिक लेनदेनका लागि ‘कागज’ गर्ने र पछिको मिति राखेर ‘चेक’ दिने गरिन्छ। आर्थिक लेनदेनस“ग सम्बन्धित यो कारोबारमा ‘विश्वासको संकटमात्रै होइन, फटाही’ हुने गरेको मुद्दाको संख्याले देखाइरहेको छ।
पैसा लगेको व्यक्तिले समयमा तिर्न नसकेपछि जबर्जस्ती ‘पछिको मिति राखेर चेक काट्न लगाउने’ प्रवृत्ति पनि छ। चेक काटेपछि त्यो प्रमाण हुने र पछि मुद्दा मामिला गर्न सजिलो हुने बुझाइ रहेको छ। जब उसको खातामा पैसा नै छैन। र, त्यो समयसम्म आउने सम्भावना नै छैन भने चेक काट्न लगाएर के फाइदा ?
पैसा फसेकालाई यसको चिन्ता हुने कुरा भएन। उसलाई कसरी कस् न पाइन्छ भन्ने नै हुन्छ। केही पहिला जिप्रकामा भेटिएका एकजनाको हकमा भने अभियुक्तले पटक– पटक चेक काटेर दिने तर खातामा पैसा नहुने समस् या थियो।
Previous: रोकिएन नदीजन्य पदार्थको उत्खनन
Next: विप्लव नेकपामाथिको प्रतिवन्ध फिर्ता लिन माग